Houcine Arfa : Karohana any Frantsa -
AccueilRaharaham-pirenenaHoucine Arfa : Karohana any Frantsa
Nampahafantatra ny manampahefana Malagasy ny governemanta Frantsay fa tafiditra ao anatin’ny lisitry ny olona karohana any Frantsa i Houcine Arfa amin’izao fotoana taorian’ny fangatahana nataon’ny fanjakana Malagasy ary naneho ny fahavononany hitondra ny raharaha eo anatrehan’ny Fitsarana any an-toerana ihany koa, araka ny andininy faha-2 toko faha-2 amin’ny fifanarahana eo amin’ny governemanta Malagasy sy Frantsay ny 4 Aogositra 1973. Hifarana tsy ho ela araka izany ity raharaha Houcine Arfa ity ary hivoaka tsy ho ela toraka izany koa ny tena marina manodidina ny fandosirany.
Fitànana fitaovam-piadiana mahery vaika, fikasàna haka an-keriny, fikambanan-jiolahy ary fisandohana andraikitra no heloka niampangana sy nanamelohana an’i Houcine Arfa tany am-boalohany. Niampy fandosirana ny fonja izany taorian’ny datin’ny 28 Desambra 2017 ary mety mbola hiampy vesatra hafa noho ireny fanambarana nisesisesy nataony miendrika fanalam-baraka sy fanakorontanana fiainam-pirenena ireny.
Rehefa tena dinihana mantsy ireny fanambarana nataon’i Houcine Arfa ireny dia tetika entina hanafenana sy hiarovana mafy ireo izay tena niray tsikombakomba tamin’ny fandosirany, an-daniny, fa tetika hanakorontanana ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny mifanandrify indrindra amin’ny tanjon’ny mpanohitra ihany koa, an-kilany.
Naelin’ny mpanohitra akaiky ny mpitondra HAT tokoa mantsy ny feo tany amin’ny fiandohan’ny volana Desambra 2017 tany fa hisy « zavatra hipoaka be » mihitsy amin’izao volana Janoary 2018 izao. Inona tokoa fa niseho ny raharaha Houcine Arfa izay tena nanakorontana ny fiainam-pirenena mihitsy kosa aloha fa sarotra ny mandainga ary toa kisendrasendra tokoa fa avy hatrany dia notaingenan’ny mpanohitra sy ny mpiara-dia aminy raha tsy hiresaka afatsy ny SMM, ny hainoamanjerin’ny mpanohitra.
Fa iza tokoa moa no mahita tombotsoa amin’izao zava-misy izao raha tsy ny mpanohitra, indrindra ireo manana raharaham-pitsarana ary izay no anisan’ny antony nikendrena manokana ny ministry ny Fitsarana. Kisendrasendra sy fifandrifian-javatra fotsiny ihany ve ny raharaha Houcine Arfa sy ny feo naelin’ny mpanohitra fa hisy « zavatra hipoaka » ny volana Janoary 2018?